Mindat District (Burmese: မင်းတပ်ခရိုင်) isadistrict in the Chin State of Myanmar. It consists of two townships and 840 villages.
Location in Chin state
In 1948, after the formation of the constitution for the Union of Burma, Pakokku province was created with two districts - Pakokku District and Mindat District. They comprisedatotal of 11 townships - Pakokku (capital city), Mindat, Yesagyo, Pauk, Seikphyu, Myaing, Gangaw, Htilin, Saw, Kanpetlet, and Matupi.
On March 2nd, 1962 the military led by General Ne Win took control of Burma throughacoup d'état, which put the government under the direct control of the military. A new constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma was established on May 4th, 1974.
Pakokku province was then broken up inafashion, whereby Pakokku District was added to the Magway Division, and Mindat District was added to Chin State.
Mindat District contains the townships of Mindat and Kanpetlet.
^ "မတူပီမြို့နှင့် ရှစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင် ခရိုင်ရုံး တည်ဆောက်ရန် လျာထားမှုကို သဘောမတူဘဲ မြို့၏ စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း၌သာ ဆောက်လုပ်ရန် လိုလားကြောင်း ဒေသခံများက ရန်ကုန်မြို့၌ သတင်းစာ ရှင်းလင်း". အီလဲဗင်း သတင်းစာ.
^ "ပလက်ဝမြို့နယ်အား မတူပီခရိုင်အတွင်း ထည့်သွင်းမဖွဲ့စည်းရန် ချင်းပါတီတောင်းဆို". ဒီဗွီဘီ].
^ "မတူပီခရိုင်ဖွဲ့စည်းရေး မြေနေရာအခက်အခဲကြောင့်ကြန့်ကြာ".
^ "တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ်". အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန.
^ "တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ်(၃၁.၃.၂၀၁၆)". အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန.
"Visit Mindat, Myanmar".
Coordinates: 21°28′N 93°24′E﻿ / ﻿21.467°N 93.400°E﻿ / 21.467; 93.400